Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr. Xuseen Sh.Axmed (Kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr. Xuseen Sh.Axmed (Kaddare)
22/04/2017	207 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Qeybta 22-aad Waxaa kaloo aan maankeyga marna ka go’ay sida sahlan ee dagaal si macna la’aan ah uga dhashay, Beer, Daaq iyo Biyo, kuwaasoo ay qolaba qolo u sheeganeysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar kaliya aan dhibaatadaas uga baxnay iyo sidii aan uga raysannay. Sideedana qiima darrada qabyaaladda horay ayaan uga maahmaahnay oo waxaanba niraa:
Ninkii xoolo kuu sheegtana hooskiisa.” Warsame wuxuu arkay in hadalkiisu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo, markaasey isku kalsooni hor lihi ku abuurantay. Wuxuuna isagoo hadalkiisa sii wata yiri “waxaad kaloo reer magaaloow aad si daacadnimo darro ah uga dhego daarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda lidka ku ahaa oo uu mar walba soomaalida usoo jeedin jiray Abwaanka la yiraahdo Xaaji Maxamed Axmed Liibaan oo aan ka xasuusto ayuu yiri Warsame:
Reer qabiila fulaan
Rabbigey ha ka qaado
Wax dhan baan qulbaneyne
Qalbigeennu ha nuuro.”
“Waxaa kaloo ay ila tahay inayan su’aasha qaybteeda labaad jawaabba u baahnayn, maxaa yeelay, (ayuu Warsame yiri ) Iskaa wax u qabsada aad maanta na weydiinaysid waa shaqo aad annaga naga barateen.”
Markii uu Warsame intaa yiri ayuu Waasuge oo saaxibkii kaabaya ku daba karay hees kale oo uu dhowr bayd ka xasuusanayey oo isla Xaaji Maxamed tiriyey markii gobanimada la qaatay ka dib. Xaaji Maxamed wuxuu aad u saluugay sida foosha xun oo wax loo maamulayey, wuxuuna fikraddiisa ku muujiyay hees qaabkeeda dhismo yahay ‘Ali-ka ya’, wuxuuna yiri:
Yaabayey Soomaaliyey Dadku waa kan yaacayee
Aan la yeelin baan arkaa.
Toltol waan kasoo tagnoo
Xorriyaan tabteed haynee,
Ninkii tiisa waayayoo
Ul la tooxan baan arkaa.
Jamhuur Dowlad noo ahoo
Jil ekeysi baan rabnee
Jeclaysi baan arkaa.
Fahmadeedu daad ahayd
Raggii fool horaad naqdee.
Far ku taal leh baan arkaa.
Quruuntaan ka qeybgalnoo
Quwa diini baan rabnee,
In qabiil qabiiladii Qumi diidday baan arkaa.
Mahad baa innoo egoo
Macdan dowlad baan helnee,
Rag muraayaddii jabtoo
Mad meadow leg baan arkaa.
Hantidii Rabbaa hayoo
Inta haybinnaan helnee,
Shalay gaal u hiiliyaal
Naga hooshayaan arkaa.
Yarya weynba dowladdii
Isla yeelashaan rabnee,
Yedda kii la gaarayoo
ku yaxoobsadaan arkaa.
La soco Qeybta 23-aad, Berri haddii Alle idmo. WAXAA QORAY:
Previous: Ciidamo Boolis ah oo loo qabtay dil ka dhacay Muqdisho
Next: Dowladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday inay Ciidamo u direyso Soomaaliya